I-Butternut Squash ne-Recipe ye-Apple Casserole
Hlanganisa ii-apples, iantyusi, iinqabileyo kunye ne-squash kwi-casserole enqabileyo yonyaka. Umfanekiso kaPatti Wigington 2012
Ngexesha le- Samhain lijikeleza , izitiya ziqala ukuhlahlela phantsi nje. Akukho nxalenye esele isele ukuvuna ... ngaphandle kokuba utyalile i-squash. Ndiyathanda i-squash, kuzo zonke iintlobo ezahlukeneyo kunye neefom. Ukusuka kwi-zucchinis, eqala ukukhetha ukuqala kwinyanga kaJulayi ukuya ngasekupheleni kukaSeptemba, kwii-delicatas zam ezihlwaya ezigqibeleleyo kwiitya ezibandayo, zonke iintsapho ze-squash zixhaphake kwaye zizinzile. Ukuba ukhula i-butternut idibanisa, ungayifumanisa loo nto kude kube ngasekuqaleni kukaNovemba, nangona oko kuya kuxhomekeka kummandla wakho wokutyala.
Le recipe yinto endiyithandayo yokubhaka ngexesha lokuvuna. Ndiyisebenzisa i-butternut yona, kodwa ungasebenzisa kakhulu i-squash - i-acorn squashes okanye nokuba amaphuphu asebenza kakuhle ukuba unayo. Ukuba unethuba lokuhamba nge-apula, lenza oku kulunge ngakumbi kuba ungasebenzisa iipulo oziqokeleyo! Sisiphi isidlo esingcono sokuwa kunokutya okugcwele i-squash, ii-apula, iinqabileyo zegolide kunye namantongomane?
Ngokuqhelekileyo ndenza oku kumatshini amakhulu, kuba ngaloo ndlela sinokukwazi ukufumana isidlo ngobusuku obubodwa, njengecala langomso ngokuhlwa, kwaye ndiyakwazi ukufumana ubuncinane enye okanye ezimbini zokutya kwamasango. Yenza okuninzi njengoko ucinga ukuba intsapho yakho iya kuyidla - nayo ikulungele ukudla okudliwayo!
Iingcamango ezimbalwa ngaphambi kokuba siqale-akukho mfuneko yokuthumela i-imeyile ukuba ndixelele ukuba abanye abantu abayidli i-bacon okanye bayaphikisana namantongwane okanye bayamthiya i-Gorgonzola ushizi. Ndiyathanda ukubeka ibhakoni kule nto, kuba ibhakoni indivuyisa. Ukuba unomhlaza, akufuneki ukuba ndikuxelele oku, kodwa vele ushiye i-bacon ngaphandle. Ngokufanayo, ukuba uyayithiya ingcamango ye-Gorgonzola ushizi, yishiye. Ukuguqula ukuya kumantongomane? Bashiye ngaphandle!
1 enkulu ikotishi ye-butternut, ehlanjululwe kunye neekerubhi
2 I-apula kaGranny Smith, i-cubed (i-peeling ikhethiweyo, kodwa ndiyishiya yam)
I-1/2 ipiloni, i-brown kunye ne-chopped in bits bits
I-1/2 ye-Cup walnuts
I-1/2 yeKomityi yeNdebe yeerar
I-1/2 yeNdebe ye-Gorgonzola ushizi uyaphula
1 intonga ibhotela, i-cubed
I-1/2 yeTyhuphu ishukela ebomvu (ukhethe - yinqumle xa ungathandi izinto ezintle)
Hlanganisa yonke into ndawonye kwisitya, uze uyibeke kwisitya esikhulu se-casserole. Bhaka nge-350 malunga neyure, ukuxuba ngamanye amaxesha. Xa usukhuphe ngaphandle kwehhavini, vumela upholile malunga nemizuzu elishumi ngaphambi kokukhonza. Ukukhonza njengecala okanye inkambo ephambili yokubhiyozela kwakho - amathuba anokuphela!
I-Fall Recipe Iingcamango
Imbewu yeengcambu ezonyiweyo: Imbewu yeengqungquthela yongezwa okonkcenkceshela malunga naliphi na umthendeleko wonyaka, kwaye eSamhain , amathanga ahlala kuyo yonke indawo! Xa ususa imbewu kwiimpompo zakho (okuyiyo yonke inxalenye yokudweba i- Jack-O-Lantern !) Ungawahlutha, uwagcobe, kwaye ubeke ixesha ngawo malunga naluphi na ukunambitheka oyithandayo.
I-Chepecice Spice Cheeseecake : Iipompu zihlala kuyo yonke indawo ukhangele ngo-Oktobha. Ukuba ungumntu othanda inqabileyo yeengxube, zama ukwenza i-cheesecake yamathanga ukuba ungeze kwixesha lakho le-Samhain!
Iingoma Zomphefumlo : Iigwele zomoya zazinikezelwa ngokusemthethweni kuSamhain kunoma ubani othe wathinta emnyango. Lo ngowomnye wemvelaphi ye-Halloween ye-today-or-treating. Yenza iifom zomphefumlo wakho kumasiko akho aseSamhain, usebenzisa enye yeendlela zokupheka ezine ezilula.
I-Crockpot ye-Apple Butter: I-Apple ibhotela iyisiphumo esiphuculisayo unyaka wonke, kwaye ukuba uyayenza ngokuwa kwe-sauce entsha ye-apula, uyayigcina idle kamva. Jabulela oku kusasa okukrakra kwisonka esifudumeleyo, okanye ngqo ngqo kwi-jar!
10 Iindaba malunga neLifourodon
Kutheni i-US ayinakuyilungisa iCEDAW yamaLungelo eMalungelo abantu?
5 Izixhobo eziqhelekileyo kwikhaya
Umhla woMlando we-Afrika-weMerika: 1910 ukuya ku-1919
11 Iimpawu ezilungileyo kunye ne-11 Imingcele yamaSikhs
Hlangana no-Archangel Raziel, Ingelosi yeMfihlakalo